ယောဟနျသ Brosler နှင့်အတူမေးခွန်း & အ | ပြီးပြည့်စုံသောဆင်းသက်လာတောင်တက်စနစ်များ
ယောဟနျသ Brosler နှင့်အတူမေးခွန်း & အ
ငါငယ်ငယ်တုန်းကနွေရာသီစခန်းတွေမှာတက်ပြီးငါအသက် ၁၀ နှစ်မှာ Team Texas ကိုတက်ခဲ့တယ်။ ငါအသက် ၁၂ နှစ်မှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာငါစပြီးယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တယ်။
Team Texas မှာရှိတဲ့ကျွန်တော့်နည်းပြကကျွန်တော့်ကိုစမ်းကြည့်ဖို့အားပေးခဲ့တယ်၊ ငါကလေထုကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးအဆုံးသတ်ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာငါနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တဲ့သူတွေကိုငါစပြီးယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ ငါဟာလိုအပ်ချက်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကန့်သတ်ချက်တွေတွန်းအားပေးနေတာကိုခံစားမိလို့ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နေတယ်။ အဆင့်မြင့်မှာဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမယ်၊
ငါတက်, ငါ့ကန့်သတ်တွန်းအားပေးခြင်းနှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အလားအလာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှစ်သက်သောကြောင့်။ ဒါ့အပြင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာကွပ်မျက်ခြင်းရဲ့စိန်ခေါ်မှုကကျွန်တော့်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါ။
ကျွန်ုပ်သည်စည်းကမ်းသုံးရပ်လုံးကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အဓိကစည်းကမ်းမှာအမြန်တက်ခြင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်မြင့်မားသောအဆင့်တွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
ခဲတောင်တက်ရာတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုမှာအချိန်နှင့်အမျှနံရံနှင့်ဇုန်တွင်ကာလကြာရှည်စွာရှိနေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အနီရောင်အတန်းများနှင့်ဆက်လက်မသွားရန်ပင်ပန်းလွန်းနေလျှင်ပင်တောင်တက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် မင်းလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလို့ထင်မိတဲ့အခါမင်းကအရမ်းတက်ကြွတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အတွက်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါအဲဒီကိုရောက်ဖို့ခက်ခဲတယ်။
အတိအကျ။ ငါကပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်လို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအပျော်တမ်းပျော်မွေ့ခဲ့လို့ငါစတင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမြန်နှုန်းမြင့်တက်ခြင်းမှာအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာသိလိုက်တာနဲ့တခြားလူတွေထက်ပိုသာချင်ခဲ့တယ်။ ငါထင်တာကတောင်တက်ခြင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာငါ့ဘဝမှာလုံခြုံမှုကင်းမဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုကလာတယ်။ ငါဘယ်လိုတက်ရသလဲလို့ခံစားရတယ်၊ ငါဟာဘယ်သူဘယ်ဝါလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ငါအနိုင်ရချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်မှုခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုနည်းနည်းလေးပင်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သော်လည်းယခုတွင်မူယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်အချိုးအစားတန်ဖိုးကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုလေ့လာသင်ယူပြီး၎င်းသည်အနိုင်ရရန်လိုအပ်သည့်အရာကိုသာလုပ်ဆောင်ခြင်းထက်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ကန့်သတ်ချက်များကိုတွန်းအားပေးခြင်းဖြစ်စဉ်၌လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေနေသည်။
အပြိုင်အဆိုင်အပြောင်းအလဲဖြစ်ချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်လျှင် ၄ ရက်မှ ၈ နာရီအထိတစ်ပတ်လျှင် 5-6 ရက်လေ့ကျင့်ရသည်။ ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံအတွက်လေ့ကျင့်နေစဉ် (အရှိန်မြှင့်ခြင်းအပေါ်အထူးအလေးပေးသော) အပတ်တိုင်းစည်းကမ်းသုံးမျိုးလုံးကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးသင်တန်းတစ်ခုစီအကြားတွင်ကွဲပြားခြားနားသောကြွက်သားအုပ်စုများနှင့်စွမ်းအင်စနစ်များကိုစနစ်တကျအနားယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤအဖြေသည်စည်းကမ်းတစ်ခုစီအတွက်ကျွန်ုပ်လေ့ကျင့်သောသံသရာတွင်မည်သည့်နေရာ၌ရှိသည်ကိုမူတည်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏လေ့ကျင့်မှုအများစုသည်အမြန်နံရံတွင်ဖြစ်စေ၊ အလေးချိန်အခန်း၌ဖြစ်စေဖြစ်သည်။ ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ပန်ကာနံရံများပေါ်သို့တက်ချင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ငါ့ကိုလှည့်စားနိုင်သော်လည်းခွန်အားကောင်းသည့်တောင်တက်ခြင်းကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းအားနှင့်နည်းပညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။ ငါကငါ့အားနည်းချက်တွေထဲကတစ်ခုလို့ဆိုရမယ်။ ခဲတောင်တက်ရန်အတွက်ငါမှုတ်ဆေးနံရံတစ်ခုတွင်ပါဝါခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဆားကစ်များပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်အားကစားခန်းမရှိစင်ကြယ်သောခံနိုင်ရည်အတွက်ကြိုးတစ်ချောင်းကိုကျွန်ုပ်လုပ်သည်။
PD auto belays နှင့်မပါဘဲသင်အကြိုက်ဆုံးမြန်သောတောင်တက်လေ့ကျင့်ခြင်း / လေ့ကျင့်ခြင်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောဆိုပါ။
ငါနံရံကိုပိတ်, ငါရှာပါ plyometric လေ့ကျင့်ခန်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သောလေ့ကျင့်ခန်းများ (သေတ္တာခုန်ခြင်း၊ ခလုတ်ခတ်ခြင်း၊ PD auto belays ပါသည့်နံရံတွင်ကျွန်ုပ်သည်အမြန်လမ်းကြောင်း၏အချို့သောအပိုင်းများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အားစိုက်ထုတ်ခြင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်လုပ်ခြင်း၊ တစ်သမတ်တည်းလေ့ကျင့်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လိုသည်။
ငါအစားအစာနှင့်အလွန်ထူးခြားသောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမပြုလုပ်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မက္ကရို (ပရိုတင်း၊ အဆီ၊ ဘိုဟိုက်ဒရိတ်) ဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုအလုံအလောက်ရရှိရန်သေချာစေရန်အများအားဖြင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်မျှတသောအစားအစာများကိုစားရန်ကြိုးစားသည်။ ငါအများကြီးလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အခါ, ငါတစ်နေ့လျှင်ကယ်လိုရီ 4,000 ဝန်းကျင်ကိုစား။
ကျွန်ုပ်တွင်အစာအိမ်အူရောင်ရောဂါရှိသည်၊ ၎င်းသည်အချို့သောအစားအစာများကိုအစာကြေရန်ခက်ခဲစေပြီးတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်၏အာဟာရဓာတ်များစုပ်ယူခြင်းကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည်အော်ဂဲနစ်အစားအစာများကိုဝယ်ခြင်း (အပိုပစ္စည်းများ၊ ပantibိဇီဝဆေးများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုကန့်သတ်ခြင်း)၊ အစာမစားဘဲကျွန်ုပ်အတွက်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏လက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအစားအစာအနည်းငယ်ကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်၎င်းကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ၊ သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာမှာအားကစားရုံကိုပြရုံသာဖြစ်ပြီး၊ သင်တက်ရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်လှုပ်ရှားမှုများကိုစတင်သင်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏စေ့ဆော်မှုသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာလှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေပါကသင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်နာလန်ထူရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
ငါဒဏ်ရာရသွားတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်တစ် ဦး စားပေးဟာအမြဲတမ်းပျောက်ကင်းအောင်လုပ်နေတယ်၊ ​​အဲဒါဟာကံမကောင်းတာတောင်တက်တာကိုအချိန်ယူဖို့လိုတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဒဏ်ရာများကိုတတ်နိုင်သမျှအတော်အတန်လေ့ကျင့်ရန်ကြိုးစားသည် (ဥပမာလက်ချောင်းများထိခိုက်မှုအတွက်လက်မရှိသောပြားများသို့မဟုတ်အပြေး / အခြားလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း) ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ချိန်ကိုထိခိုက်နိုင်သည့်မည်သည့်အရာကိုမျှပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါကံကောင်းလို့ပဲ Zack DiCristinoUS Team ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်ဒဏ်ရာရတိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များပြုလုပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဒဏ်ရာအန္တရာယ်ကိုကန့်သတ်ရန်ကျွန်ုပ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါကသူ့ကိုအထွေထွေအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
“ အလျင်အမြန်တွယ်တက်” သည့်ကြွက်သားများကားအဘယ်နည်း။ တောင်တက်ခြင်းနှင့်အရှိန်တက်ခြင်းတို့တွင်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ကြွက်သားအမျှင်နှစ်မျိုးရှိသည်။ အနှေးခံကြွက်သားသည်ကြာရှည်စွာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ ရေကူးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအေရိုးဗစ်လှုပ်ရှားမှုများကဲ့သို့သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုမိုအသုံးပြုသည်။
အမြန်တွယ်တတ်သည့်ကြွက်သားကိုပေါက်ကွဲခြင်း၊ လျင်မြန်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပက်ဖျန်းခြင်း၊ ခုန်ခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းတက်ခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသည်။ တောင်တက်ခြင်းအားလုံးသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေ, ထို့ကြောင့်သင်အများအားဖြင့်အမြန်တွန့်နေသောကြွက်သားကိုအသုံးပြုသည်။
ငါအားကစားခန်းမနှင့်မှာလေ့ကျင့် ယူအက်စ်အေတောင်တက်လေ့ကျင့်ရေးစင်တာ Salt Lake City, UT ၌တည်သည်။ ငါမသွားခင်အိမ်မှာငါ့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုအားလုံးကိုငါလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါခရီးသွားနေတုန်းမှာအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်ဘဲ၊ အားကစားကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဒေသခံအားကစားရုံတွေကိုပုံမှန်တက်နေတုန်းပဲ။
ငါလေ့ကျင့်ရေးကနေအနားယူရန်ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကြောင့်ခဏနေလို့အရမ်းနေမကောင်းဖြစ်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအများကြီးမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်ုပ်သည်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်နေပြီးဖျားနေစဉ်ကျွန်ုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့သောကြံ့ခိုင်မှုကိုပြန်လည်ရရှိရန်ကြိုးစားနေသည်။ ငါဒီဖိအားနိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပျော်မွေ့ခဲ့တယ်။ ပြိုင်ပွဲတွေမထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ငါပျော်စရာတောင်တက်ခြင်း၊ အပြင်ကိုထွက်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်မှုမှထွက်ခွာရန်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။
ငါအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် 2017 ကမ္ဘာ့ဖလားအားကစားပြိုင်ပွဲ Wroçlaw, ပိုလန်၌တည်၏။ ငါသည်လည်းပထမ ဦး ဆုံးအိုလံပစ်ခြေစစ်ပွဲအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Hachioji ရှိကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ် 2019 ၌တည်၏။
လူတိုင်းကသူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းကိုအထူးအာရုံစိုက်သည်၊ ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြိုင်ပွဲများနှင့်လူတိုင်းယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အမီလိုက်သည်နှင့်ယှဉ်လျှင်အကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအားကစားသမားအချို့နှင့်အတူတူပင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေခြင်းကိုအလွန်ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အာရုံပျံ့လွင့်စရာများကိုမည်သို့ညှိရန်နှင့်သင်၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုအာရုံစိုက်ရန်သင်ယူရန်သင့်အားတွန်းအားပေးသည်။
လေထုနှင့်ဖိအားကိုခံစားပါ၊ ၎င်းသည်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မကြုံတွေ့ရခဲသောခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏အားသာချက်အဖြစ်သုံးပါ၊ ၎င်းကိုသင်၏ပြိုင်ဘက်များထက်မိမိကိုယ်ကို ဦး တည်ရန်သင်ယူပါ။ ကျွန်တော့်နည်းပြက“ controllable controllers” လို့ပြောပြီးကျန်တာတွေကနောက်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။
မရွေးချယ်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်လုံးအတွက်အယူခံများရှိပါသည်။
သင်အကြိုက်ဆုံးကျောက် (များ) ကဘာလဲ။
ငါ Red River Gorge, Rocky Mountain အမျိုးသားဥယျာဉ်၊ Rocklands နှင့် Hueco Tanks တို့ကိုနှစ်သက်သည်။
ဒီနေရာမှာ SLC ရှိသူငယ်ချင်းများကိုတက်ကြွသောအဖွဲ့များရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကံကောင်းသည်မှာကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်ထံမှလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ သူတို့မှာငါနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ကြီးပြင်းလာတဲ့လူတွေ၊ အနာဂတ်အိုလံပစ်သမားတွေနဲ့တောင်တက်သမားအသစ်တွေပါ ၀ င်ပါတယ်။ တောင်တက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏ရှုထောင့်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဖိုးတန်ပြီး၎င်းတို့မှကျွန်ုပ်အားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်ယူသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ခံစားရသည်။
ငါတော်တော်လေးအရပ်ရှည်တဲ့ကျောက်သားအချို့ကိုအပြင်ဘက်မှာဖြည့်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလုံခြုံစွာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးမကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထားဖို့ကြိုးစားတယ်။ ငါအချို့ပြိုင်ပွဲများမတိုင်မီတော်တော်လေးကြောက်လန့်ခဲ့ပေမယ့်ငါဂရုစိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသာခံစားမိကြောင်းတွေ့ရှိရ, ထိုသို့ငါ့ကိုအခြေခံနှင့်အမှုအရာရှုထောင့်၌စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
မနက်စာမှသည် Burritos အထိသင်၏ပြီးပြည့်စုံသောနေ့သည်မည်သည့်အရာနှင့်တူသနည်း။
တစ်နေ့လုံးအိပ်ပျော်၊ အရသာရှိတဲ့အစာကိုစားပါ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ၊ တောင်တက်နည်းနည်းလေးပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့အခြားတိုင်းပြည်မှာ!
နောက်ကျောမှာ Coach Kyle ၏ရုပ်ပုံပါသောအစိမ်းရောင် tank top ဖြစ်သည်။ အတော်လေးကျောက်မျက်!
Taylor Swift အယ်လ်ဘမ်သစ်။ ဒါ့အပြင် hip-hop ၏ကြီးမားသောပန်ကာ။
ကျွန်ုပ်၏သယ်ဆောင်ရလွယ်သောအမြှုပ် roller တစ်ခုရှိသည်။ ကြိုက်တယ်!!
အခြားအားကစားများလား အဲဒါတွေကဘာတွေလဲ။ ဟားဟား။
အကြိုက်ဆုံးတောင်တက်ခြင်းနှင့် Non- တောင်တက်ရုပ်ရှင်?
ချစ်တယ် ဆေးတခါသောက် ရုပ်ရှင်နှင့်ဖောရက်စ Gump!